Izindaba - Umehluko phakathi kwe-Resilient Setated Butterfly Valve ne-Metal Seated Butterfly Valve
Umehluko phakathi kweRelium Butterfly Valve Resated
Ama-valve e-Butterfly, anesakhiwo esihlanganisiwe, ukwakheka okulula, ukusebenza kahle, nokugcinwa kalula.
Zingenye yamavalvu ezimboni athandwa kakhulu.
Sivamise ukuba namavalivevane aqinile aqinile, noma ama-valve amvemvane agqoke injoloba kule catagory, sinamavaluva wevemvane agqoke amarabha, amavaluva omagobolondo agcwele irabha, ama-valve ohlobo lwenjoloba ahlanganiswe nenjoloba kanye namavalvu kavemvane afakwe irabha kabili.
Zombili izindawo zokufaka uphawu ze-valve ziyizinto zensimbi noma enye impahla enzima, engenakho ukusebenza kahle kokufaka uphawu, kepha inezinto ezinhle zomshini, njengokushisa okushisa okumelana nokulwa nokugqoka.
Ngokuvamile, kunokwehluka okulandelayo kwamaveluvemvane ezihlalo ezimbili ezihlukene.
<1> Isakhiwo Esihlukile
Umugqa womugqa wokuklama we-butterfly ohleli phansi ngenkathi idizayini ephindwe kabili noma kathathu ye-valve ehleliwe yensimbi.
<2> Ukushisa okuhlukile okufanelekile
sisebenzisa amandla e-butterfly ahleli phansi ekushiseni okujwayelekile, kuyilapho i-valve ihleli i-butterfly valve isetshenziselwa ukushisa okuphansi, okujwayelekile nokuphakeme.
<3> Ingcindezi ehlukile
I-valve ehlala e-butterfly ehleli kahle ifanelekile ingcindezi ephansi futhi ejwayelekile futhi i-valve ehleliwe ye-butterfly i-valve nayo ingahambisana nendawo yengcindezi ephakathi nendawo.
<4> Ukusebenza ngokufaka uphawu okuhlukile
I-valve yevemvane ehleli phansi ne-Metal ehleliwe uvemvane i-valve inokusebenza okuhle kokufaka uphawu. Kamuva kungavimba kahle ekucindezelweni okuphezulu nasekushiseni.